Ecuador mechiri ókèala wee laghachi ụgbọ elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ecuador mechiri ókèala wee laghachi ụgbọ elu
Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Ekwedọọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
ọ bụ onye ọhụụ
Gọọmentị Ecuador ekwupụtala mmechi ókèala maka ndị njem si mba ofesi niile, na-amalite na 23: 59 na Sọnde, Machị 15.
N'otu oge ahụ, Ecuador amachiela ụgbọ elu mba ofesi niile ịbanye mba ahụ wee mechie ọdụ ụgbọ mmiri ya na ókè ngafe.
Otu onye njem tweeted: Anyị rapaara na Colombia, anyị enweghị ike ịnweta ụgbọ elu na Ecuador tupu ókèala ahụ ga-emechi, enwere naanị ụgbọ elu atọ ma anyị chere n'ahịrị maka awa 4, ka a gwa anyị na enweghị oche ọzọ , ya mere anyị rapaara ebe a ruo mgbe oke ala ga-emepe ọzọ.
Onye ọzọ na-agụ tweeted: Abụ m onye Canada bi na ya Ecuador na a ókè emechi na ihe dị ka awa 30. Enwere m ụlọ ọgụ nke kagburu na mberede. Biko nyere m aka - Achọrọ m ịla n'ụlọ.
Ugbu a, Ecuador nwere ọrịa coronavirus 28, agbakwunyere 2 taa, mana ọ nweghị onye nwụrụ na Ecuador na nje ahụ.
Ecuador bụ obodo izizi na South America na-emejuputa mmechi oke ala n'ihi Coronavirus.